Faa'iidooyinka khamrigu: Saamaynta wanaagsan ee biirku ku leeyahay caafimaadka | Ragga Stylish
Haddii aad ka mid tahay malaayiinta ragga ah ee ku raaxeysta (ha ahaato galaas, weel, dhalo ama qasacad), waxaad xiiseyneysaa inaad ogaato faa'iidooyinka biirka. Cabitaankani wuxuu u fiicnaan karaa caafimaadka, laakiin dabiici ahaan, kaliya haddii isticmaalkiisa loogu soo dhowaado habka saxda ah: taasi waa, dhexdhexaad..
Mid ka mid ah cabitaannada ugu da'da weyn adduunka, beerku wuxuu leeyahay kumanaan sano oo taariikh ah. Faa'iidooyinkeeda lama tirin karo kumanaan, laakiin way istaahilaan in si walba loo ogaado, maadaama ay aad u xiiso badan yihiin. Waxyaabaha soo socdaa waa saamaynta togan ee cabitaanka khamrigu ku yeelan karaan caafimaadkaaga, kahortaga cudurada kaladuwan ilaa faa iidooyinka kale ee laga yaabo inay kula yaabeen.
1 Beerku wuxuu ka hortagaa cudurada
1.1 Dhagxaanta kilyaha
1.2 Wadno xanuun
1.3 Omega 3 ee wadnaha
1.5 Maxay yihiin cudurada kale ee ay ka hortagi karaan biirtu?
2 Biirku wuxuu kaa caawinayaa inaad hurudo
2.1 Kor u qaado tayada hurdadaada si dabiici ah
3 Beerku wuxuu ilaaliyaa aragga
Beerku wuxuu ka hortagaa cudurada
Waxaa jira daraasado tilmaamaya biirka inay xulafo yihiin markay tahay in laga fogaado cudurada. Sida laga soo xigtay cilmi baarayaasha qaar, biirku wuxuu dheereyn karaa noloshaada, isagoo ka hortagaya cuduro kala duwan iyo dhibaatooyin caafimaad (qaar aad u daran), laga bilaabo wadne qabadka ilaa sameynta dhagxaan kellida, iyada oo la marayo istaroog. Xitaa waxaa jira hadal kansar ah, laakiin daraasado dheeraad ah ayaa wali loo baahan yahay si loo ogaado haddii, sida la rumeysan yahay, qaar ka mid ah maaddooyinka ku jira biirka ay gacan ka geysan karaan daaweynta cudurkan.
Waxay umuuqataa in biirka maalinlaha ah ay si weyn u yareeyaan halista dhagxaanta kalyaha. Sababta ayaa ah cunista cabitaankan caanka ah waxay kaa caawin doontaa in kaadi yareyso.
Waxa kale oo jira daraasad la xiriirta isticmaalka biirka oo leh qatar yar oo wadno xanuun ah. Xididdada dhiigga ayaa sababi kara dhibaatooyin, markii ay taasi dhacdana, fursadaha wadno-qabadku way sii kordhaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad cabto biir waxaad gacan ka geysan kartaa ilaalinta wadnahaaga. Waxaa jira hadal ah in halista lagu yareyn karo ilaa boqolkiiba 50. Buunbuunin ama maahan, waa faa iido aad hubaal ka heli doonto xiisaha haddii aad tahay macmiil joogto ah oo biir ah.
Omega 3 ee wadnaha
Fiiri maqaalka: Faa'iidooyinka Omega 3. Marka lagu daro baruurtan caafimaad qabta cuntadaada waxay muhiim u tahay habsami u socodka wadnaha, laakiin faa'iidooyinkiisu aad ayey usii dheeraanayaan. Soo ogow waxa ay yihiin iyo, wixii ka sarreeya, sida ugu fudud ee loogu dhex daro cuntadaada iyada oo loo marayo cuntooyin kala duwan.
Cabitaanka biir dhexdhexaadka ah ayaa sidoo kale yareyn doonta halista istaroogga, taas oo dhacda marka qulqulka dhiigga iyo oksijiinta maskaxda xiranto xinjirowga dhiigga. Waxaa jira hadal ilaa boqolkiiba 50 kayar kuwa aan cabbin. Sida muuqata sababaha midkood waa dabacsanaanta uu biirka u keeni lahaa halbowlayaasha. Cabitaankan sidoo kale waxay horumarin doontaa wareegga dhiigga si aad ah, saameyn taas oo sidoo kale fure u ah ka hortagga xinjirowga dhiigga, taas oo kordhinaysa halista istaroog. Dhamaan faa'iidooyinka biirka, tani shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan.
Maxay yihiin cudurada kale ee ay ka hortagi karaan biirtu?
Aan ku sii wadno faa'iidooyinka biirka. Marka laga reebo dhagxaanta kelyaha, wadne istaagga, iyo istaroogga, isticmaalka biirka ayaa sidoo kale lala xiriiriyay halista ugu yar ee cudurka macaanka nooca 2 Markay tahay Alzheimers, biirka sidoo kale wuxuu dhihi lahaa fikrad.
Waa in la ogaadaa in biirka uu sidoo kale xoojin lahaa lafaha, yareynta halista jabka. Laakiin, sida faa'iidooyinka intiisa kale, ku-takrifalku wuxuu yeelan karaa uun saameyn ka soo horjeedda, sidaas darteed haddana dhexdhexaadnimadu waa furaha.
Biirku wuxuu kaa caawinayaa inaad hurudo
Sida dhammaan cabitaanka khamriga, biirku wuxuu yareeyaa heerarka walaaca. Qaadashada hal mar markiiba shaqada kadib waxay kugu caawineysaa inaad xiriir la yeelatid asxaabtaada, laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad dareento xasilooni iyo degenaansho ka dib maalinta mashquulka badan.
Dareemida fiicnaanta shaqada kadib, biirku wuxuu kaloo kaa caawin karaa inaad hesho nasasho wanaagsan habeennimo. Sirta ayaa ah taas biirku wuxuu kicin lahaa wax soo saarka dopamine. In kasta oo ay tahay saameyn xiiso leh, haddana laguma talin karo inaad ku tiirsanaato si aad u seexato. Iyo, dabcan, waxay noqon kartaa mid khatar ah oo aakhirka noqota dhibaato.
Kor u qaado tayada hurdadaada si dabiici ah
Fiiri maqaalka: Waxyaabaha saameeya tayada hurdada. Halkaas waxaad ka ogaan doontaa waxa kaa hor istaagaya inaad si fiican u seexato habeenkii iyo sida loo xalliyo si loogu raaxeysto nasasho caafimaad leh oo nasasho leh taas oo kaa caawin doonta inaad diyaar u ahaato inaad ka gudubto dhammaan caqabadahaaga maalin kasta oo leh dammaanad qaad.
Beerku wuxuu ilaaliyaa aragga
Faa'iidooyinka khamrigu sidoo kale waa lagu ogaadaa caafimaadka indhaha. Waqtigaan la joogo, aragu waa mid ka mid ah dareenka ugu nugul sababo la xiriira dhammaan saacadaha aan ku qaadanno shaashadaha qalabka elektarooniga hortiisa, sida taleefannada casriga ah, kiniiniyada iyo kumbuyuutarrada. Marka waxba kuma waayi doontid isku dayga cuntooyinka iyo cabbitaannada lagu tiriyo ilaalinta indhahaaga. Beerkuna waa ku dhex jiraa. Ka hortageyaasheeda ayaa ka caawin doona inay indhahaagu xaalad wanaagsan ku hayaan, iyadoo laga ilaalinayo cudurada ay ka midka yihiin cataract.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Faa'iidooyinka biirka